Raiisul Wasaare Gaas “Balcad waa Degmo istiraatiji ah una muhiimsan Difaaca Caasimada” – SBC
Raiisul Wasaare Gaas “Balcad waa Degmo istiraatiji ah una muhiimsan Difaaca Caasimada”
Posted by Webmaster on Juun 27, 2012 Comments
Raiisul wasaaraha DKMG ah ee Soomaaliya C/wali maxamed Gaas ayaa shalay gaaray degmada Balcad ee gobolka shabeelaha dhexe waxyar ka dib markii halkaasi ay la wareegeen ciidamada Amisom iyo kuwa DKMG ah oo isgarabsanaya.
Raiisul wasaaraha oo ay gelbinayaan kolonyo ciidana yaa gudaha u galay degmada iyadoona ay hareeraha wadooyinka ku sugnaayeen dadweyne iyo ciidamada DKMG ah ee Soomaaliya .
Waxa uu halkaasi hadal ku siisay saxaafada isagoona sheegay in uu si aad ah ugu faraxsanyahay gacan ku dhigista ciidamada DKMG ah ay gacanta ku dhigeen degmada Balcad, waxaanu intaasi ku daray in Balcad ay tahay goob istiraatijiyad u leh DKMG ah ee Soomaaliya.
Hadaba Degmada Balcad waa deegaan Ceyn kee ah.
Degmada Balcad waa degmo istiraatijiyad ah kana tirsan gobolka Shabeelaha dhexe, waxay aad muhiim ugu tahay difaacida magaalada Caasimada ah ee Muqdisho, waxayna u jitaa 30km.
Balcad waxay caan ku tahay Dhaqashada Xoolaha nool, waxaana berigii hore looyaqiin Taytayley waana sababta xiligaasi loogu bixyay,
Waxaa kale oo ay Balcad caan ku aheyd soo saarida Suufka oo laga sameynjiray unifone-ka ardayda iyo Cidamada Qalabka sida ee Dowlada .
Waxaa mara Balcad wabiga Shabeele, waxayna leedahay Qeyraad kala gedisan, waxaana ka mid ah caanaha oo loo iibgeeyo magaalada Caasimada ah ee Muqdisho maadaama deegaanka ay u badan yihiin dad xoolo dhaqato ah.
Qabashada Degmada Balcad ee DKMG ah waxa ay ku soo aadeysaa xili dhowaan ay gacanteeda galeen Deegaano kala duwan DKMG ah oo ay ka mid tahay Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeelaha hoose.